Ivo Havana kumbodzidzisa izvi muKirasi Yekushambadzira | Martech Zone
Chipiri, Kurume 11, 2014 Douglas Karr
Ini handitende kuti chakavanzika, asi ini ndinotenda zano rakabudirira kwazvo iro rinowanzo kufuratirwa mukutengesa nekushambadzira ndiyo kukosha kwenetiweki yako. Vanhu vanowanzo tarisa pakudzoka pane kudyara, kuverenga, kutsvagisa, kushambadza, dhizaini, maficha, kugona, kugadzira, nezvimwe sezvavanenge vachishanda kuburikidza nekushambadzira kwavo. Izvo zvese zvakanaka uye zvakanaka asi kana iwe ukatsanangura zvese izvo zvinhu, hapana chimwe chazvo chinokupa iwe nzira inoenda kumari iyo bhizinesi rako inoda kuti irarame uye ibudirire.
Kushambadzira hakuna chinhu pasina vateereri kana nharaunda. Pamudzi wayo, ndinotenda kuti basa rekutengesa uye kushambadzira harisi rekuita tengesa, ndezvekudziridza kuvimba pakati pemunhu ane dambudziko uye mhinduro yako. Ndakasangana nevanhu vanoshamisa vane hunyanzvi vakagadzira zvigadzirwa zvinoshamisa… asi vakashaya network yekuvatengesera. Uye… zvakapesana kwazvo… Ini ndakatarisisa zvigadzirwa zvinogumbura zvinoita kuti zvitengeswe uye zvibudirire. Kwete nekuti yaive yakanaka chigadzirwa, asi nekuti paive nevateereri izvo kuvimba kambani iri kuitengesa.
Ini pachangu, ini handidyara zvakanyanya senge ndaimboita mumakambani, zvigadzirwa kana maficha. Pane kudaro, ndinoisa mari zvakanyanya muvanhu. Ini ndinowana nguva yekusangana nevanhu vazhinji, kubatsira vanhu vazhinji, kutyaira kutarisisa uye kutengesa kune avo vanokodzera, uye kunyange kushandisa nguva nesimba mumikana uko pasina chaiko kubatsirwa kwandiri. Izvo zvese zvinoenderana kuti ndiani network.
Kune vamwe vanobudirira vebhizinesi vandinoziva vakapisa network yavo. Yavo chekutanga kambani inoita inonakidza uye, kuburikidza nekumanikidza kwakanyanya kutengesa, inobvisa uye inoita mushe. Asi avo Inotevera kambani inowira pasi. Sei? Nekuti kuvimba kwaenda. Ichi ndicho chikonzero nei makambani akajeka asingashande zvichibva pane ruzivo kana tarenda, ivo vanowanzohaya zvichibva pane network yauri kuvaunzira. Yako network yakanyanya kukosha kupfuura iwe kana zvasvika pakutengesa uye kushambadzira. Chengetedza mari kune yako network uye iwe uchaona uri chinhu chakakoshesesa pfuma kune waunoshandira kana mutengi.
Usanditenda? Tarisa kumabhizinesi akabudirira akakukomberedza, tarisa padhuze netiweki dzevatengi nevatengesi vavanoshanda navo. Mari inowanikwa kubva kuvanhu - kwete kubva kuzvigadzirwa, maficha kana marogo anotonhorera. Kunyangwe isu tichifanira kuisa mari muhunyanzvi persona online, chinangwa hachifanirwe kunge chiri chekutengesa - chinofanirwa kunge chiri chekuvaka network uye nekuzadza mukaha pakati pechisarudzo chekutenga nekutengesa nebridge re kuvimba.
Vatengi vedu vanokosheswa ndevaya vanga vagara nesu kwechinguva uye vanotivimba. Vakaisa mari zvakanyanya mumasevhisi edu uye takavimbisa mashandiro avo kuti tirege kurasikirwa nekuvimba kwavo. Nekudaro, ivo vanotiunzirawo kwatinotumira kwese kwakanakisa… sezvo kuvimba kwatovepo mukati medandemutande ravo. Chengetedza mari yako.
Tags: network kukoshapasocial networksoical network
Iye Anokanganisa Mukushambadzira Mashini